सामग्री कहाँ छ? | Martech Zone
सामग्री कहाँ छ?
सोमबार, अक्टोबर 2, 2006 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
आज रात मैले यस लेखमा लेख लिंकमा क्लिक गरेँ र घाइते भए। यस पृष्ठमा कही कही खबर छ? (त्यहाँ छ ... मैले यसलाई रातो हाईलाइट गरेको छु)। यो एकदम हास्यास्पद छ! को यो पृष्ठ पढ्न चाहान्छ? त्यहाँ विज्ञापनहरू, फ्ल्याशिंग, चलिरहेको कारहरू, फ्लोटिंग डिभ्स ... बिल्कुल हास्यास्पद छ। किन म यी साइटहरूमा जान्छु भनेर कुनै आश्चर्य छैन। म पढ्न वास्तवमा सामग्री फेला पार्न सक्दिन!
यो रिपोर्टरको त्यस्तो अस्वस्थता हो जसले स्पष्ट रूपमा एक लेखमा केही समय बिताए (जुन मैले पढिन)। म एउटा बराबरीको बारे सोच्न पनि सक्दैन ... सायद २3मिनेटको विज्ञापनको साथ minute मिनेटको टिभी कार्यक्रम हेर्दै।
लक्ष्य, चिकन सूट लक गर्नुहोस्
Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP ... ती सबै सामानहरू! यो तपाईको सोच भन्दा सजिलो छ!
अक्टूबर २०, २०१ at २:3० अपराह्न
म पूर्ण रूपमा डग सहमत गर्छु। यसले मलाई आश्चर्यचकित बनाउँछ जब म त्यस्तै साइट देख्छु यदि उनीहरू विज्ञापन पैसा वा पाठकहरूको लागि लेखिरहेका छन् भने। व्यक्तिगत रूपमा जस्तो साइटमा म यसलाई एक अभियान बनाउछु कुनै विज्ञापनमा क्लिक नगर्नुहोस्।
ब्लगरको रूपमा हामी हाम्रो ब्लगमा कति “फैन्सी” सामानहरू समावेश गर्न संघर्ष गर्दछौं। मैले मेरो ब्ल्गमा नयाँ सुविधा सुरू गरेको छु जहाँ हप्ताको अन्त्यमा मैले वेबसाइटहरूको सारांश पोष्ट गर्दछ जुन इम्स शो उल्लेख छ। मेरो श्रीमती र सफल ब्लगको रूपमा लिज सोच्दछन् कि यो बोरिंगको प्रकार हो र थोरै छुट्टिनु पर्छ। तर म मान्छे फर्काउन घृणा गर्दछु जो केवल जानकारीको खोजीमा छन्, फ्यान्सी ग्राफिक्स होइन। यसले मद्दत गर्दैन कि मसँग मेरो शरीरमा रचनात्मक हड्डी हुँदैन जब यो कलात्मक सामानहरूको लागि आउँदछ।
पोष्ट राख्नुहोस्। मलाई तपाईंको ब्लग मन पर्छ
धन्यवाद, रोय! म समर्थनलाई साँच्चिकै कदर गर्दछु। यसको मतलब धेरै छ!